Araarsaa Mardaasaa poolisoota Oromiyaa 1,000 irratti tarkaanfiin fudhatamu ibsan. – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooAraarsaa Mardaasaa poolisoota Oromiyaa 1,000 irratti tarkaanfiin fudhatamu ibsan.
Araarsaa Mardaasaa poolisoota Oromiyaa kanneen shanee waliin hidhata qaban 1,000 irratti tarkaanfiin fudhatamuu EBCtti himanii jiru.
Akka Odeessi argannetti Abiyyi Kaadiroota isaa walitti qabe akkas jachuun gorse:
Oromoon Sirna Nafxanyaa Oromiyaa irratti ijaaruuf filannoo geggeefamu irratti hirmaachuu hin Qabu! Guyyaa: Caamsaa 10,…
Komishinii poolisii Oromiyaa komaander Tamasgeen Waagjiraa M/Murtii waliigala Oromiyaa irratti Bilbilaanin waamamee dhufe jechuun waakkatan.…
Kaaba Oromiyaa walloo irratti humni waraanaa humnaan meeshaa hiikkachiisaa jira. Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo SQ…